Moqdishoo Keessatti Haleellaan Boombiin Of-wareegdotaa Dhoosame Namoota 10 Ajjeesee
Waxabajjii 20, 2017
Haleelaaa gahe booda
Magaalaa Moqdishoo, aangaa Waajir keessatti haleellaa har’a geggeessame kanaaf garee Al-shabaab tu abbummaa labsate.
Magaalaa galma-mootummaa Somaaliyaa – Moqdishoo keessatti, haleellaan Boombiin of-wareegdotaa konkolaataa irraa dhoosame yoo xiqqaate namoota 10 ajjeesee, 18 madeesse – jedhu – namoonni ijaan arganii fi aangawoonni naannoo.
Namoonni ijaan argaman akka jedhanitti, Mini-baasiin dhoka’aan guutame, guyyaa waree booda sa’aa kudha-lamaa fi daqiiqaa afurtama irratti, gamoo waajira bulchiinsa naannoo, ka qabsaa’onni - dargaggoonnii fi dubartoonni keessatti walga’anii jiranitti, ulaa cabsee seenee dho’insa guddaa dhageessise – jedhu – namoonni ijaan argan.
Namni konkolaataa sana keessa ture tokko ta’uu ka dubbatan – Koomishinarri Itti-aanaan aanaa sanaa Abbukaar Sheek-Ahmed, “namoota baay’ee tu nu jalaa dhume. Irra-jireessi isaanii, dargaggota qabsaa’ota” jedyhan.
Hooggantoon waldaa dubartootaa, Koomishinarra aanaa sanaa – Omar Abdullaahii Hasan, Hoogganaan gurmuu dargaggootaa fi barreessaan bulchiinsa aanaa sanaa illee haleellaa sanaan madaawan – jedhama.
Gareeleen baraarsaa, namoota lubbuun hafanii fi reeffa kanneen dhumanii barbaacha, Buldoozeriidhaan caccabaa gamoo sanaa gargaggalchaa jiran.
Al-shabaab, waggaa kana keessa, magaalaa galma-mootummaa Somaaliyaa – Moqdishoo keessatti, haleellaa hammeessee jira.
Gareen Al-qaa’idaatti hidhata qabu kun, mootummaa biyyoolessaa Somaaliyaa buqqisee, mootummaa Islaamummaa gad-dhaa
Tokkummaan Mootummootaa Giddu-gala Ripubliukii Dimookraatawa Koongoo Keessatti Ajjeechaa Dhihoo Geggeessamee Mootummaan Akka Qoratamu Gaafate
Maratoonii kalee Kanaadaa Manitoobaatti dorgoman Tarreessaa Fakkansaatti moo’atee badhaafame
Xayyaarri Siriyaa Rukutamee Kufee jetti Raashiyaan
Baamaakoo Cinatti Hidhattonni Ajjefaman